Goobtu waxay ka kooban tahay niyad-jabka culus ee isku-dhafan oo isku-dhafan oo leh qoryaha yar-yar ee bulaacada ah, qulqulo badan oo badan, iyo sandflats badan oo ku kala firdhiyey godad.
Goobta juqraafiga ah ee udhaxeysa labada IAAD ee kale (Lake Abhé iyo Hanlé plain) iyo kudhow xuduudaha Itoobiya, avifauna waxay muujinaysaa waxyaabaha ka tarjumaya noocyada shimbiraha ah ee bixiya xaafadaha ku yaala Itoobiya. Gobacad oo leh laba goobood oo kale oo Jabuuti ah ayaa ah meesha kaliya ee ay ku ciyaarto dabbaaldegga oo leh awoodda dadweynaha.
Intaa waxaa dheer, joogitaanka noocyada nooca caadiga ah ee dhul-beereedka waxaa ka mid ah dhoobo madow ah, jilicsan oo jilicsan, carbuunta carbeed, Lichtenstein, cantoobe-qoryaan leh iyo carro-qoryo leh, halka wadis badan oo dhirta lagu xiro spurfowl, huruud, qoob ka ciyaara mousebird, batoorka grey_headed batik, crombec, qoryaha duurjoogta ah iyo qaniinyada afduubka Africa.
Iyo gobolka Ali-Sabieh / Assam, Gobadhe waa meesha labaad ee loo duubo walxaha yar yar.